सुन्दरहरैंचाका जनप्रतिनिधिले यसरी आक्रोश पोखे पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसमक्ष - निष्पक्षखबर
सुन्दरहरैंचाका जनप्रतिनिधिले यसरी आक्रोश पोखे पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसमक्ष
विराटचोकः पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई आज नेपाल स्कुल अफ अन्ट्रप्रनरसीपले १० थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा जनप्रतिनिधिले विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिसमक्ष आक्रोश पोखेका छन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सुन्दरहरैंचाका प्रमुख शिवप्रसाद ढकाल र प्रदेश सांसद लोकप्रसाद संग्रौलाले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसमक्ष आक्रोश पोखेका हुन् । जनप्रतिनिधिले सहयोग गर्दागर्दै पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक काम नगर्दा विश्वविद्यालयको अवस्था खराब हुँदै गएको जनप्रतिनिधिको भनाइ थियो ।
‘लामो रस्साकस्सीपछि विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त हुनुभयो’ नगरप्रमुख ढकालले भने, ‘अब विश्वविद्यालय लम्किने मात्रै होइन चम्किन्छ भन्ने थियो । तर त्यस्तो भएन ।’ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले नै खासै चासो नदिएको उनले आरोप लगाए । कोरोनाको महामारीको पहिलो लहरमा विश्वविद्यालयले क्वारेन्टाइन निर्माणको लागि स्थान उपलब्ध गराएर सहयोग गरे पनि दोस्रो लहरमा अपेक्षाकृत सहयोग नपाइएको उनले बताए ।
‘विश्वविद्यालयमा कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार म धाएँ । तर कतैबाट सहयोग नपाएपछि म आफैँ ‘ग्वाँ’ भएँ’, उनले अगाडि थपे, ‘कोभिड संक्रमितको उपचार पनि होस् र सहज क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा जस्तो सहज उपचारमा पनि विश्वविद्यालयको नाम आओस् भन्ने नगरपालिकाको चाहना थियो । तर पदाधिकारीको असहयोगकै कारण बाध्य भएर हरैंचा अस्पताललाई स्तरोन्नति गरेर कोभिड अस्पताल व्यवस्थापन गर्नुपर्याे । यो संस्था स्वास्थ्य विज्ञ उत्पादन गर्ने कारखाना हो, तर कारखानामै विज्ञको हाहाकार किन हुन पुग्यो भन्ने मैले बुझ्न सकिनँ ।’
उपकुलपतिले शीघ्र निर्णय लिन सक्नुपर्ने नगर प्रमुख ढकालले बताए । अहिले विश्वविद्यालय आउने बाटो कालोपत्रे भएपछि बिरामी आउन धेरै सहज भएको बताउँदै नगरपालिकाले गर्ने सहयोग गर्न सधैँ तयार भएको उनले बताए । नगरपालिका आफैँ लागेर कोरोना संक्रमित नगरवासीको घरघरमा पुगेर औषधी वितरण गरेको, मध्यरातमा पनि अक्सिजनका सिलिण्डर संक्रमितका घरमा पुर्याएको बताउँदै यत्रो भौतिक संरचना हुँदा पनि विश्वविद्यालयमा आफूले सोचेअनुसार स्वास्थ्य सेवा दिने वातावरण बनाउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश सांसद लोकप्रसाद संग्रौलाले पनि विश्वविद्यालयले गति लिन नसक्नुमा पदाधिकारी मुख्य दोषी भएको बताए । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल भनिए पनि अस्पताल जस्तो नभएको उनले बताए ।
‘यहाँ पिलोसम्म काटिँदैन’ संग्रौलाले भने, ‘अनि कसरी हो यो शिक्षण अस्पताल ?’ घरनजिक अस्पताल भए पनि उपचारको लागि अन्यत्र जानुपर्दा मन दुख्ने गरेको उनले सुनाए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपकुलपति प्रा. डा यादवराज कोइरालाले विश्वविद्यालय स्थापना हुँदा नै जनस्तरबाट सहयोग जुटाएर चलाइने भनिएको हुनाले सरकारले सहयोग गर्न नसकेको बताए । विश्वविद्यालयको प्रस्तावनामा रहेको जनस्तरबाट सञ्चालित भन्ने वाक्यांश नहटाएसम्म सरकारबाट सहयोग पाउने गाह्रो हुने कोइरालाको भनाइ थियो ।
उद्यमशीलताको तालीम दिने अन्ट्रनसीपले कोभिडको समयमा धेरै जना अक्सिजनको अभावमा छटपटिएको पाएपछि सहयोगी खोजेर सहयोग गरिएको दातासँग समन्वय गरेर स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको नेपाल स्कुल अफ अन्ट्रप्रनरसीपका प्रणय समशेर राणाले बताए । यसै क्रममा सामाजिक सञ्जालमा रञ्जन ओझा तथा अस्पताल निर्देशक डा. विपेश आचार्यसँग समन्वय भइरहेको समयमा डा. आचार्य काठमाडौं पुगेर स्वास्थ्य सामग्री अति नै आवश्यक भएको बताएपछि हामीले १० थान स्वास्थ्य सामग्री दिने निर्णय गरेको राणाले जानकारी दिए ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई १० वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण
सुन्दरहरैंचावासीलाई हँसाए पाँडे र जीग्रीले